သံယောဇဉ် ၁၀ ပါး | မေတ္တာရိပ်
← ကိလေသာအဆင့် (၃)ဆင့်
မပြောသင့်သော စကား →
သံယောဇဉ် ၁၀ ပါး	Posted on October 10, 2009	by mettayate ဒီ ကိလေသာ ၁၀ပါး ပြောရင်းနဲ့ တခါတည်း သံယောဇဉ် အကြောင်းပါ ထည့်ပြောမှ တော်မယ်ထင်ပါတယ်။ တချို့သောသူတွေက သံယောဇဉ်ကို မေတ္တာထဲမှာ ထည့်ပြောနေကြတာကို သတိထားမိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဒီသံယောဇဉ်ကပဲ ဒုက္ခတွေကို သယ်ဆောင်လာတာပါပဲ။ သူ့ကို အကုသိုလ်တရားထဲမှာ ထည့်ပါတယ်။
သက်ရှိသတ္တ၀ါတွေကို ခန္ဓာ၊ အာယတန၊ ဓါတ်၊ ဒုက္ခသစ္စာ၊ ၀ဋ်မီးစာ၌ အခါခါလောင်မြိုက်စေသော ကိလေသာမီး လည်းမည်သော၊ သံသရာဝဋ်ဒုက္ခနှောင်အိမ်မှ သံယောဇဉ်နှောင်ကြိုးလည်းမည်သော အကုသိုလ်တရားဆိုး ဆယ်မျိုးကား –
၁) ကာမရာဂ သံယောဇဉ် အာရုံငါးပါး၌ တပ်မက်စွဲလမ်းခြင်း ၂) ဘ၀ရာဂ သံယောဇဉ် ကာမ၊ ရူပ၊ အရူပ ဟူသော ဘ၀သုံးပါးကို တပ်မက်စွဲလမ်းခြင်း
၃) ပဋိဃ သံယောဇဉ် စိတ်ဆိုးခြင်း၊ အမျက်ဒေါသထွက်ခြင်း
၄) မာန သံယောဇဉ် ထောင်လွှားခြင်း
၅) ဒိဋ္ဌိ သံယောဇဉ် ရုပ် နာမ်ကို သူ-ငါပဲဟု အယူအစွဲမှားခြင်း
၆) ၀ိစိကိစ္ဆာ သံယောဇဉ် ရတနာသုံးပါး ကံတရား၌ ယုံမှားသံသယဖြစ်ခြင်း
၇) သိလဗ္ဗတပရာမာသ သံယောဇဉ် ရှစ်ပါး မဂ္ဂင်၊ ကျင့်စဉ်မပါ၊ သစ္စာမမြင်၊ အယူမစင်ကြယ်သော အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်း
၈) ဣဿ သံယောဇဉ် မနာလိုခြင်း
၉) မစ္ဆရိယ သံယောဇဉ် ၀န်တိုကောက်ကျစ်ခြင်း
၁၀) အ၀ိဇ္ဇာ သံယောဇဉ် သစ္စာလေးပါးကို အမှန်မသိခြင်း တို့ ဖြစ်ကြပေသည်။
သောတာပတ္တမိမဂ် သည် ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ သံယောဇဉ်ငါးပါးကို ပယ်သတ်ပေးသည်။
သကဒါဂါမိမဂ် သည် ရုန့်ရင်းသော ၁ နှင့် ၃ ကို ပယ်သတ်ပေးသည်
အနာဂမ်မဂ်သည် သိမ့်မွေ့သော ၁ နှင့် ၃ ကို ပယ်သတ်ပေးသည်။
အရဟတ္တမဂ်သည် ၂ ၄ ၁၀ တို့ကို ပယ်သတ်ပေးသည်။
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← ကိလေသာအဆင့် (၃)ဆင့်